Waa sidee Xaalada Muqdisho, kaddib dib u dhicii ku yimid bannaan bixii Mucaaradka | Home somali news leader
French MPs approve controversial security bill limiting police images
Home NEWS Waa sidee Xaalada Muqdisho, kaddib dib u dhicii ku yimid bannaan bixii...
Waa sidee Xaalada Muqdisho, kaddib dib u dhicii ku yimid bannaan bixii Mucaaradka
Xaalada Muqdisho ayaa saaka ah caadi, iyadoo dib u furmay dhammaan waddooyinka muhiimka ahaa ee magaalada oo shalay ciidamada amniga la soo dhoobay.
Isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa dib u bilowday, waxaana degenaanta ka jirtay magaalada ka dambeysay kaddib markii uu baaqday bannaan bixii ay qorsheeyeen Midowga Musharaxiinta.
Wasiirka Amniga Xasan Xundubey ayaa shalay ka sheegay shir jaraa’id uu qabtay in jidadka Muqdisho ay u xireen sugidda amniga bannaan baxa, balse ay soo dhoweynayaan in Midowga Musharaxiinta go’aansadeen in bannaan baxa ay baajiyeen.
Hase ahaatee Midowga Musharaxiinta ayaa ku eedeeyay Xukuumadda inay jebisay heshiiskii, isla markaana ay ciidamo dhigtay waddooyinka, waxaana ay tilmaameen in bannaan baxa aanay ka tanaasulin oo ay dib ka soo sheegi doonaan, amnigoodana suganayaan.
Dadka Muqdisho ayaa walwal badan ka qaba is jiid jiidka siyaasadeed ee dib u soo cusboonaaday, kaddib todobaad magaalada xaalkeeda caadi ahaa oo Xukuumadda iyo Mucaaradka ay heshiis ka gaareen wada hadaladii Hotel Decale.
Previous articleQaramada Midoobey oo si kulul u cambaareysay qaraxii xalay
Next articleBrazil’s daily deaths in Covid-19 reach record highs during the brutal second wave